Aqalka sare culeys dhaqaale mooyee faaiido uma laha qaranka: WARBIXIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Aqalka sare culeys dhaqaale mooyee faaiido uma laha qaranka: WARBIXIN
Waxa isa soo taraya dhawaqa ah in dalka laga baabiiyo waxa loogu yeero aqalka sare oo haba yaraatee aan wax faaiido ah ugu jirin ummada Somaliyeed. Aqalka sare ayaa la meelmariyay dhamadkii fadhiid Xasan Sheekh asagoo cod ka raadinaayay wuxuuse geliyay dalka dhaqaale aanu qaadi karin ayuu yiri Cali Calasow.
Sheekada aqalka sare ayaa waxa hor kacaayay horjoogihii Butlaan ee Faroole asagoo rabay kuraas badsi, waxana qalinka ku duugey Mahiiga iyo Shekh Shariif halka fadhiid Xasan Sheekh hirgeliyay ayuu raaciyay Cali Calasow. Waxayba la baxeen magaca Sinayt oo laga soo minguuriyay Maraykanka aan ka turjumin astaan Somaliyeed.
”Waxaad is weydiin kartaa faaiidada dhaqaale ee dalku ka helayo koox la magacaabo oo fadhiga ku cunta cashuurta hooyada aan la daryeelin laga qaado. Waxaa kaloo is weydiin kartaa goorma ayaa Somaliya qaadatey nidaamka dhiciska ah ee Maraykanka, Somalidu ma keensan karto miyaa nidaam iyagu leeyihiin ayuu qabaa Xuseen Warsame.
”Waxaan aad uga xumahay in madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ayna haba yaraatee dhaqaajin dib u eegista kuraasta golaha shacabka iyo kala dirista sheekada aqalka sare, si dadku u helaan dawlad ay ku kalsoonaan karaan ayuu yiri Cali Calasow
Ma arko hogaamiye wax ka bedelaya nidaamka fashilka ee dalku ku sugan yahay inuu welli soo baxay ayuu yiri Xuseen Warsame laakiin laga hadhi maayo ilaa dadku helaan dawlad ay aamini karaan.